हराएको मौलिकता, भत्किएको समाज : ‘विकास भर्सेज निकास’ « Naya Page
प्रकाशित मिति : 11 July, 2019 12:26 pm
काठमाडाैं, २६ असार । एक चिकित्सकले विद्यार्थीलाई सोधे, ‘यो विद्यालयमा तपाईंहरु कति जना हुनुहुन्छ’ ?’ ‘हामी त तेल (१३) जना मात्लै (मात्रै) हो’, एक विद्यार्थीबाट सोझो जवाफ आउँछ । ‘ओइ ओइ त…रले (सरले) २०० जना भन भन्या हैन’, बीचैमा अर्का विद्यार्थी फ्याट्ट बोल्छन् ।
चिकित्सकले विद्यालयको अवस्थाबारे खोतल्दै गए । विद्यार्थी कथा र व्याथा ओकल्दै गए । ‘तपाईंहरुसँगैका अरु विद्यार्थी कहाँ हुनुहुन्छ त ?’ ‘ऊ त्यो पाली (पारी) को ताई (टाइ) लाउने इत्कुल (स्कुल) मा पद्नु हुन्छ (पढ्नु हुन्छ), मलाई पनि त्यो ताइ (टाइ) लाउने इत्कुल (स्कुल) मा कस्तो पद्न (पढ्न) मन ला‘थ (छ), तल (तर) मेरो ममी बाबा त गलिब (गरीब) हुनुुन्थ (हुनुहुन्छ), पैतै (पैसै) थैैन (छैन) ।’
उनको सरकारी स्कूलका शिक्षक महिनाको एक दिन तलब बुझ्न मात्रै आउने रहेछन् ।
‘हेल्लो नमस्ते !’ अर्धनिद्रामा रहेका एक व्यक्तिले सिरानीमा रहेको सिटामोल दिँदै भने, ‘बिहान एउटा बेलुका एउटा, चियासँग खाए पनि हुन्छ, पानीसँग खाए पनि हुन्छ ।’ अलि पर रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पुगेका चिकित्सकको नमस्ते नफर्काउँदै एक व्यक्ति भट्भट्याउँछन् । श्रीमती स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज भए पनि सबै काम श्रीमानबाटै हुँदोरहेछ ।
सबै सही हुनलाई देशको नीति सही हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि पहिले त देशको राजनीति सही हुनुपर्‍यो । त्यसकारण उनी नेता भेट्न गए । नमस्कार भन्न नपाउँदै नेताको पनि धाराप्रवाह शुरु भयो, ‘तपाईंको काम बन्छ, पहिलो नम्बरमा मेरो पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा जति काम हुन्छ मेरै पार्टीका कार्यकर्तालाई ठेक्का दिनुपर्छ, त्यति भएपछि ढुक्क हुनुस् तपाईंको काम बन्यो ।’
उता विद्यार्थी क्लब भन्छ, ‘पैसा नदिए त कामै हुँदैन ।’ गाउँमा धर्मका नाममा भएका विकृति पनि उस्तै जकडिएको छ । पाइलैपिच्छे बाधा र अड्चनले समाजसेवा गर्न हिँडेका चिकित्सक भत्किएको समाजको रुप देखेर विक्षिप्त भए ।
गाउँका केही पढे लेखेका विदेश । भएकाहरु काम गर्दैनन् । तराईबाट आएका मजदुरले धानेको छ । स्थानीय उत्पादन र मौलिकता हराउँदैछ, बजारिया सामानले गाउँ भरिएको छ । गाउँ खुला दिसामुक्त भएको त छ तर एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन । रोगले थलिएकाहरु शहर बजारमा उपचारका लागि पैसा माग्नेको बग्रेल्ती छन् । सरकारले पनि मूल जरो पत्ता नलगाई बिरामीका लागि पैसा मात्रै खन्याउने गरेको छ । तर बिरामी नै हुन नदिने उपायको बारेमा ध्यान छैन ।
काठमाडौँको सर्वनाम थिएटरभित्र रङ्गकला गोरखाको प्रस्तुतिमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘विकास भर्सेज निकास’ का जीवन्त दृष्यले ग्रामीण भेगको वस्तुस्थितिलाई चित्रण गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । ‘नाटक गर्नुछ भने युगको आवाज बोल्नुपर्छ, वास्तविक कथालाई बोल्नुपर्छ, यो नाटकले पनि गोरखाको एउटा गाउँको वास्तविकता बोलेको छ ।’ निर्देशक रामबाबु रेग्मीले भने । नाटकमा मुख्यतः गोरखाको एक गाउँका समस्या उतारेको उनको भनाइ छ ।
बुधबार नाटक हेरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हरेक सांसदहरुले हेर्नैपर्ने खालको नाटक बनेको भन्दै सङ्घीय संसद्मा देखाउनका लागि आफूले सभामुखसँग कुरा गर्ने बताए । डा. भट्टराईले भने, ‘यो नाटक आफ्नै जीवनसँग मेल खाएको जस्तो लाग्यो, नाटकमा जस्तै आफ्नो जीवनकालमा देशमै बस्नुपर्छ भनेर लागेको मान्छे हुँ ।’ विकास समृद्धिका मन्त्र धेरै उच्चारण भइरहेको अवस्थामा गाउँमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान नपुगेको कुरा यथार्थ चित्रण गरेको भन्दै उनले नाटकको प्रशंसा गरे ।